डा. केसीमाथि प्रहरीको बलजफ्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — जुम्लामा सत्याग्रह थालेका डा. गोविन्द केसी मंगलबार नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंमा आइपुगेका छन् । यसअघिका सत्याग्रहकै क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य उनको माग छ ।
१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग कान्तिपुरका अतुल मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जुम्लामै किन सत्याग्रह गर्नुभयो ?
म सात महिनाअगाडि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर सेवा गर्न गएको थिएँ । २ वर्ष अगाडि जुम्लामै सत्याग्रह गरेको थिएँ । त्यहाँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठान राम्ररी सञ्चालन भएको छैन । जुम्लामा पहिले अनशन बस्दा प्रहरी प्रशासन लगाएर अस्पताल तोडफोड गरियो, स्थानीयलाई पिटियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मलाई अपहरण गरेर ल्याइयो । सरकारसँग सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । त्यही भएर फेरि जुम्ला गएको हो ।
अरू प्रदेश, क्षेत्रमा पनि सम्झौता गरेअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि दबाब दिन र वरिष्ठता मिचेर पार्टी कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्ति आदिको विरोध गर्न फेरि सत्याग्रह थालेको हुँ । इलाममा अनशन बस्दा पनि जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइयो । १६ औं अनशन बस्दाबस्दै जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाइएको थियो । त्यसमा भएको माफियामुखी बुँदा संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता सु–शासनका ६ वटा माग राखेर मैले सत्याग्रह थालेको हो । यी साधारण माग हुन् ।
अहिलेको नयाँ माग के छ ?
अख्तियारसम्बन्धी माग थपिएको छ । अख्तियारमा ठूला–ठूला घोटाला गर्ने, पार्टीकै भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । यस्ता घोटाला तथा बहालवाला र अवकाश पाएका आयुक्तहरूलाई समेत छानबिन गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्ति हेर्नुपर्छ ।
माग पूरा होलान् त ?
सरकारले माग पूरा गर्नुपर्‍यो । अत्यन्त साधारण र आमव्यक्तिको माग राखेका छौं । सबै नेपालीको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्छ । यो विषय संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यो काम सरकारले नै गनुपर्ने हो । ओलीको कार्यकालमा ५ पटक सत्याग्रह गर्नुपर्‍यो । सम्झौता गर्ने र फेरि उल्लंघन गर्ने ?
जनताले पेट काटेर कर तिरेको पैसाबाट उनीहरू तलब खान्छन्, जनताको काम पनि गर्नुपर्‍यो नि । तर उनीहरूले देशको ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि सत्याग्रह बसेको हो । माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ ।
तपाईंलाई किन ट्रमा सेन्टर लगियो ?
मैले जुम्लामा माग राखेर ३ चोटि अल्टिमेटम दिएँ– पहिला ३ साता, त्यसपछि १० दिन र पछि सात दिनको । अल्टिमेटम दिएर म स्वास्थ्य सेवा गर्न जान्थेँ । जुन दिन अल्टिमेटम दिन्थेँ, त्यही दिन जुम्लामा कर्फ्यु लगाइन्थ्यो । अल्टिमेटम दिएपछि मलाई बाहिर निस्किन दिइँदैनथ्यो । अन्तिमपटकमा म एउटा मन्दिरमा पुगेँ ।
हामीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई उनीहरूले धम्क्याए । छैटौं दिनमा राति ११ बजे प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर मलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए । यसपटक पनि दुई वर्षअघिको जस्तो होला भनेर म आफैं प्लेनमा नेपालगन्ज आएँ । त्यहाँ एक दिन बसेर आज १ बजे प्लेनमा आएको थिएँ, शिक्षण अस्पतालमा बस्छु भनेर । यतिका वर्ष शिक्षण अस्पतालमा सेवा गरियो भने किन अन्त जाने ?
शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्स एयरपोर्ट लगिएको थियो । एक जना साथीले त्यसमा नजानू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको गाडीमा जानुस् भन्नुभयो । मेडिकल एसोसिएसनको गाडीलाई प्रहरीले गेटमा आउनै दिएनछ । त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामी त्यही एम्बुलेन्समा बस्यौं । पछि जबर्जस्ती ट्रमा पुर्‍याए । म चोटपटकको बिरामी होइन । शिक्षण अस्पताल जान नदिएसम्म कुनै उपचार र परीक्षण गर्दिनँ भनेँ । बिरामीको हैसियतले समेत शिक्षणमा जाने मेरो अधिकार छ नि । मलाई ओलीको निर्देशनमा ट्रमा लगिएको हो । उनी राजा हामी रैती ? तर म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हो । मेरो नागरिक अधिकार बारम्बार हनन गरिएको छ ।
तपाईंले उठाएका कति माग हालसम्म पूरा भए ?
अरू पार्टीको सरकार भएका बेला समेत मैले सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । ओलीका पालामा भन्दा अरू सरकारमा बढी उपलब्धि भएका छन् । तर ओलीमा पेलेरै जाने प्रवृत्ति छ । जनताको चरम दबाब आएपछि उनी सम्झौता गर्छन् । कार्यान्वयन गरिँदैन ।
यी हुन् डाक्टर केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड–१९ तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हामीसँग ०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई छानबिन र कारबाही गरियोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिनमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायत कारबाही गरियोस् । सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्घीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०७:२२